Isiqhingi Mallorca, izimpawu zendawo okuzokwenziwa ezichazwe kulesi sihloko iyipharadesi, Emerald imbozwe ihlathi. Ngokumelene okwenza kahle noLwandle LwaseMedithera, nokuntula cypresses nenhle * nomkhoba kanyekanye, Fluffy, zom-alimondi izihlahla nemithi yesundu nenhle, lesi siqhingi kubonakala utalagu ethambile - ngakho-ke esiphundu futhi emuhle. Yiqiniso, lesi sifunda amumethe ezikhangayo ahlukahlukene ezikhanga izivakashi ezivela emhlabeni wonke.
Kokubona Palma de Mallorca (Spain), umxhwele ngenxa yobuhle balo nokuhlala ukuzijabulisa. Lapha-ke ingenye okugcinwa edume kakhulu futhi ngokunethezeka emhlabeni. On the ngezizathu ivulekile at 41000 m 3 55 okugcinwa thematic, lapho izakhamuzi ihlala ngaphansi kwamanzi ekujuleni (mayelana 700 zinhlobo), yaletha esuka emakhoneni ezahlukene iplanethi. Lapha ungabona yezimila nezilwane ezihlukahlukene siphakathi nePacific, Atlantic, Indian Ocean futhi bone kahle noLwandle LwaseMedithera. Lezi yobuciko design aquarium sibekwe obala izivakashi ukwazi. Ukuze uhambo enhle phansi kolwandle kwaba ngawe bezijabulisa hhayi kuphela, kodwa futhi ulwazi, kubalulekile ukuze ujoyine ukuvakasha. Okokuqala, uzobe bajwayelane nezilwane ocebile iMedithera. Esigabeni esilandelayo ukuvakasha kuyoba uhambo ezweni ezimibalabala wezilwandle ezishisayo. Palma Aquarium idume the ejulile ushaka aquarium e-Europe, kanye iqoqo umxhwele coral bukhoma. Oceanarium ivuliwe kusuka April kuya Okthoba, ukuhambela kwakhe izobiza abadala 24 euro, izingane ezineminyaka engu eminyakeni 4 kuya ku-12 - 14-euro. emnyango iminyaka efinyelela kwemithathu ukhululekile aquarium.
yobuciko eziningana izakhiwo Gothic kungabonwa esiqhingini Mallorca. Izimpawu zokubekisa zase ezifana uhlelo uhlale okuthakazelisayo, ezithakazelisayo. Bellver Castle Yakhiwa ukuqhela Palma de Mallorca. Okokuqala (ekhulwini le-14) kwaba mithi yokuhlala smart ke (ekhulwini le-18) waba leziboshwa zezombusazwe. Kusukela ngo-1976, le nqaba wavulwa Museum Palma lapho esichasiselweni ekutshela ngomlando edolobheni - kusukela abantu bokuqala abahlala kuyo eNkathini Ephakathi. Ukuma okungavamile isakhiwo yezakhiwo - lena kuphela castle round e-Europe. imibhoshongo yalo ezine kuthambekele amaphuzu eziyinhloko, kwamakhamera ocingo aphakeme (25 m), ngifuna enyakatho. Manje isakhiwo ukuzijabulisa bukhoma: amakhonsathi, ngisho imishado ngesitayela ephakathi. A gem wangempela sesakhiwo esikhulu nqaba kuvulandi ivulekile esitezi phezulu, alinikela ukubukwa-panoramic sabo enkabeni yedolobha bakhangisa ethekwini Palma. Lokhu mbukwane ephawulwe yibo bonke izivakashi inqaba Bellver e Majorca. Izikhangibavakashi, ukubuyekezwa okuyinto ekhishwa kulesi sihloko akuphelelanga lapho.
Isiqhingi Majorca, ogama ezikhangayo zihlanganisa izinto eliyingqayizivele adalwe nemvelo, ukumema ukuvakashela emhumeni Dragon. Esikhathini enchanting lemimoya emigedeni, elilengayo nasemachibini ehlanzeke uzolahlekelwa ithrekhi isikhathi. amakhilomitha angaphezu kuka ezimbili okutholakele emangalisayo zilindele kuwe, kubhebhethekiswe yasendulo Folk-legends. Yayisekelwe Kuyinkolelo-ze uthi Knights Templar, futhi filibusters Mediterranean wafihla emhumeni engcebweni yakhe. Ukusesha basuke bengabangane bengcebo ezingenakulinganiswa ethathwe ngekhulu le-14, kodwa yi yabo kwaba namanje kuphela ibalazwe eningiliziwe isiboshwa.
Emhumeni Dragon has ezinhlanu ezahlukene usayizi amachibi, phakathi okuyizinto Nergo, Delicias futhi Martel. Lesi sakamuva ngezinye izikhathi lisetshenziselwa njengoba indawo ekhonsathini .... Abaculi ukudlala, uyasuka izikebhe ku echibini esikhanyayo. Ukuzwakala komculo emhumeni vaults kwenza isethulo enjalo emnandi. A imiphumela ukukhanyisa ubunjiniyela wezakhiwo echibini Martel ehlotshisiwe Carlos Buigas. master okungenakuqhathaniswa elakhiwa ngo eHayidese an amazing Lomthombo ovuthayo ngu amakhulu ama ukukhanya ukuba balingise kwelanga. Uzodinga cishe ihora ukuhambahamba amahholo ngokubabazekayo Dragon emhumeni, kodwa ngeke uzisole isikhathi esichithwa.
Lokhu fabulous edolobheni charm nawe nokuzola yayo futhi bayozela endulo yesifundazwe. ezikhangayo Architectural esiqhingini Mallorca umxhwele ubuhle babo futhi engeyona inkimbinkimbi.
Valldemossa inama sezindela Carthusian, okuyinto uvikelekile edumile Zhorzh Sand futhi uFrederic Chopin. Kukholakala ukuthi lo mbhangqwana kwaba owathola Mallorca njengoba indawo izivakashi. Lo mculi omkhulu wayehlushwa isifo sofuba, futhi banakekela potions yakhe indela olulodwa, owaba ngaleso sikhathi yezihambi. Kamuva, Chopin ubhala elegiac okwandulela "Raindrops", okusikhumbuza isikhathi esidabukisayo eboshwe ophoqelelwe Mallorca. Manje emangqamuzaneni sezindela esichasiselweni anikezelwe umbhali wezingoma, futhi esontweni lendawo njalo unika amakhonsathi ka Chopin.
emigwaqweni emincane uphahlwe idolobha namaMoor Valldemossa amabhlogo itshe wekugcina, izindlu ngamunye isithombe lendawo usanta - Catalina. Valdemosskie ikati ngenhlonipho zenyuka emigwaqweni yedolobha nge ezinjengenyanga ehlotshiswe pearl wendawo - isiko ephakathi ukuthintwa noma amacebo okuthengisa ongawacabanga? Zama ukubuza lo mbuzo ukuze izakhamizi Valldemossa.
Isiqhingi Mallorca (Spain), okuyinto izimpawu zendawo eyaziwa emhlabeni wonke, ezazidume ngokutshala umbono layo eliyingqayizivele komkhathi olungenamkhawulo iMedithera. ezinhle Ikakhulukazi landscape kwenkundla Cape Formentor: amatshe, embozwe awugqinsi siluhlaza amahlathi, olunothile coast emaweni, lapped by emangalisa kolwandle blue and white sandy beach strip, kokushiya nasemanzini ... fermenter ungaphakathi engxenyeni esenyakatho Mallorca. Lihlala nezindawo zomlando. Esikhathini 19 yesibani ekhulwini iye yamisa lapha. Banikezwe inaccessibility lendawo, lesi sakhiwo wayengumJuda wamavukelambuso ngempela. Mike izenzo manje, Nokho, lokhu kwakumelwe kube ngcono. Neziphawulekayo kwenqaba medieval kwekhulu le-16, ezakhiwe phezu iCape. Izivakashi ngaphandle kokuphazanyiswa ungase zibabaza ukubukwa ekhungathekisayo kusukela Formentor, endaweni engamamitha amamitha angamakhulu amathathu eyakhelwe isiteji yokubuka, "Mirador".
esigodlweni Lasendulo, okuyinto uqhosha Spain. Mallorca, izinto okungase unomphela, linenani wezinqaba lasendulo, Palacio de la Almudaina - omunye wabo. Lapha viziers obuswa namaMoor futhi amakhosi Arab. Manje esigodlweni iyona esigodlweni Mallorca. Iphinde behlaliswe nehhovisi Usigaxamabhande lempi futhi eNational Museum.
Inamandla olungaphambili lwesonto medieval nge imibhoshongo ezine patrol ukukuhlangabeza Almudaina. Phezulu omunye imibhoshongo yalo amaHubo bugcizelelwa umfanekiso saint idolobha abavikela - Arhangela Gavriila. Enye wabizwa ngokuthi "Umbhoshongo amakhanda" ukuthi ufaneleke ngokugcwele injongo yayo esidlule - lapha embukisweni izinhloko ikhanda zabantu ababulawa.
Igumbi Throne yitshe eliyigugu okhazimulayo ukuba kube nendumezulu zesigodlo. Iyisonto izinto eziningi zobuciko. Egcekeni samakhosi indlwana St. Anne, eyakhiwa ngekhulu le-14. Promenade eduze Royal Garden futhi zokugeza Arabhu ngeke kubonakale kungekho bezijabulisa kancane.
Lokhu sezindela lakhiwa yezindawo oluyimfihlakalo kunalo lonke futhi engcwele esiqhingini Mallorca. Izikhangibavakashi lokhu ipharadesi ngokuvamile banomlando omude futhi othakazelisayo. Ngokusho legends zendawo, lezindela Luka imele kusayithi amathempeli lasendulo, okuyinto Kwakuseshwa imikhuba yobuqaba yokukhulekela kule mimoya yehlathi. Abavubukuli olwenziwa kumbiwa endaweni engcwele futhi wathola izinto Insimbi Bronze Ages. Ngokusho yetinsita ekhulwini le-13, umelusi nje wathola esizeni ukwakhiwa kwalesi Isigodlo kwesithombe sikaMariya oNgcwele, bawubuyisela endaweni ekahle - ethempelini wendawo. Nokho, umfanekiso ekuseni futhi ehlathini, endaweni efanayo. Lapha kulapho yesonto yakhiwa.
Ekupheleni kwekhulu le-17, isigodlo yabekwa kabusha futhi bokuzisholo emoyeni Yenguquko. Ngemva kwesikhathi esithile futhi phezu olungaphambili lwesonto isakhiwo wasebenza oluvelele wezakhiwo Gaudi. Ngaphakathi Isigodlo kugcinwa le esifuze lasendulo - esifanekisweni Engcwele Virgin Luka itshe elimnyama. Ngaphakathi isakhiwo usebenza i Museum bemivubukulo kanye nensimu ajabulisayo aliveza emhlabeni sezindela.
izingadi Ezinhle Alfabit - kwenye indawo enhle, okungaba yokuziqhenya ngayo Spain. Mallorca, izinto okuyizinto azinake, ezazidume ngokutshala izimila yayo ekhephuzelayo. Alfabit izingadi - isibonelo eliyingqayizivele landscape design. Bona azungeze Manor of the gama elifanayo. Esisogwini olusentshonalanga Mallorca, esinqeni ezintabeni enamadwala we Tramuntana, izingadi ezikhanga izindlela zayo shady uphahlwe lemon, orange zamakhiwane nezinye izihlahla zezithelo kanye nezihlahla. amahlozi Lush esundu, Pines elimnandi ukunikeza wamukelekile thunzi emini ukushisa okhathele. Iziteshi ngamanzi ahlanzekile ecacile, elakhiwa e-isakhiwo esihle kakhulu isitayela Arab-namaMoor, ojabulisa kakhulu iso amachibi olunothile nemithombo.
Alfabit izingadi zihlukaniswe yasenhla nemithombo yasenzansi. I yamuva ayizona ebanzi xaxa futhi unikezwa ngokuphelele ezandleni cool emithonjeni ajabulisayo uhambahamba Jets amanzi. Esikhathini izingadi aphansi zingatholakala echibini, igcwele iminduze amanzi, futhi amahlozi izihlahla eziyinqaba.
Manor La Granja
Omunye izigodi endala esiqhingini Mallorca. Izikhangibavakashi uhlamvu yezakhiwo isici ukuzibamba nenhle ekuklanyweni. Lolusiko lwasendaweni iqiniso lokuthi lapho walesi siqhingi kwakungumbusi kuncike ayehlasela filibusters esikhohlisayo. Ukuze zidonse ukunaka kwanoma pirates okunethezeka ngokweqile kwaba akanangqondo.
Manor La Granja eyakhelwe ngalolo - isitayela - elula zasebukhosini. Yakhiwa ngesikhathi uMbuso WaseRoma ngomyalo wabaholi yamakhosi zasebukhosini. Ngo isakhiwo ngekhulu le-13 ukunikeza look zanamuhla, futhi ngemva kweminyaka engamakhulu amabili kabusha yobukhulu sayo samanje. Manje izivakashi zingathola zibabaza eziningi Manor amakamelo, egcwele zobuciko ezihlekisayo, kanye udabule engadini lwendawo uhlaza nemithombo yamanzi ecacile.
Uma unquma ukuthatha izinto Mallorca wedwa, wena nje udinga ukuthatha uhambo isitimela mlando okuyisona phakathi Palma de Mallorca futhi Sóller. The elingaphakathi yokuqala izimoto yasekuqaleni kwekhulu le-20, bayigcina ngokucophelela iminyaka engaphezu kweyikhulu. Amathrekhi ujantshi babekwa irekhodi isikhathi esikhathini esifanayo, welula endleleni entabeni oyinyoka nemihubhe eminingi Tramuntana. Through the amafasitela enkulu izimoto ungajabulela izithelo zomnqumo, amahlathi, namathafa ekhungathekisayo. Nsuku zonke ngo-kokubili amaphuzu ekupheleni nomzila owalandelwa ama-izitimela eziyisithupha. Zenza izitobhi eziningana endleleni, ethandwa kakhulu zazo - Bunyola. Ngo Sóller ungaqhubeka uhambo lwakho uyisidala - ukugibela leli tram gesi echwebeni wendawo.
Baia de Alcudia
Ethandwa kakhulu iholidi umndeni uya khona kuyinto bay ogwini olusenyakatho lwalesi siqhingi - Bahia de Alcudia. Mallorca, lapho ezikhangayo zihlanganisa ezinhle olunesihlabathi nokuntula elimnandi izihlahla zikaphayini Mediterranean, inikeza uhla zokungcebeleka okunethezeka kule ingxenye yesiqhingi. Ubuhle amanzi sendawo ehlanzekile nokuzola Gulf nanela abazali ukuhamba nezingane. Kanye enkulu sandy beach, zikhona izindawo zokungcebeleka eziningi: Port D'Alcudia, Platja de Muro, Platja d'Alcudia, nabanye.
Eduze eChwebeni Alcudia kuyinto edolobheni elidala, ingxenye ezindala kunazo zonke kuzo ejabulisa iso nge izindlu zalo ongaphakeme eyenziwe ngetshe, yakhiwa kuleli isitayela ephakathi, Izindonga ezinkulu, emigwaqweni emincane ...
PlayStation 4: izici namakhono. Izibuyekezo nezithombe